Ulwaphulo-mthetho lwe-Era Pass Law of South Africa
Ukupasa iMithetho ngexesha loKwahlukana
Njengenkqubo, ubandlululo lujolise ekuhlukaniseni abahlali baseMzantsi Afrika, abaMnyama nabemi baseAfrika ngokwemizalwane yabo. Oku kwenziwa ukwenzela ukuphakamisa ukuphakama kwama-Whites kunye nokuseka umbuso omncinci we-White. Imithetho yomthetho yadluliselwa ukufezekisa oku, kubandakanywa noMthetho woMhlaba ka-1913, uMthetho woMtshato oMxhatshazo ka-1949, noMthetho wokuLungiswa koMthetho ka-1950-konke okuye kwadalwa ukwahlula iintlanga.
Ngaphantsi kobandlululo , idluliselo yemithetho yenzelwe ukulawula ukuhamba kwabantu baseAfrika kwaye zibhekwa njengenye yeendlela ezimbi kakhulu oorhulumente waseMzantsi Afrika asetyenzisayo ukuxhasa ubandlululo. Umthetho obangelwayo (ngokukodwa ukuchithwa kwePasses kunye nokulungelelaniswa koMqulu weMibhalo no-67 ka-1952 ) owaziswa eMzantsi Afrika wawufuna ukuba abamnyama baseAfrika bathwale amaxwebhu angamazisi "ngencwadi yereferensi" xa kungekho njengezindlu okanye ama-bantustans).
Ukupasa imithetho yavela kwimimiselo yaseDutch neBrithani eyenziwe ngexesha loqoqosho lwekhoboka leCape Colony le-18 nele-19 leminyaka. Ngenkulungwane ye-19, imithetho emitsha yokupasa yamiselwa ukuba kuqinisekiswe ukunyanzeliswa kwabasebenzi baseAfrika abancinci kwidayimane kunye neemigodi zegolide. Ngomnyaka we-1952, urhulumente wadlulisela umthetho ogqithiseleyo ofuna ukuba onke amadoda aseAfrika aneminyaka eyi-16 nangaphezulu ukuba athathe "incwadi yesithenjwa" (ithathe indawo ye-passbook yangaphambili) ebambe ulwazi lwabo lomntu kunye nolwazi.
(Ukuzama ukuphoqa amabhinqa ukuba athathe iincwadi zokupasa ngo-1910, kwaye kwakhona ngonyaka wama-1950, kubangele imibhikisho enamandla.)
Incwadana yokupasa yayifana nepasipoti kuba iqulethe iinkcukacha malunga nomntu ngamnye, kubandakanywa isithombe, iminwe yeminwe, idilesi, igama lomqeshi wakhe, ixesha lomntu owaqeshwe ngayo, kunye nolunye ulwazi oluchonga.
Abaqeshi bavame ukufaka uvavanyo lokuziphatha komnini.
Njengoko kuchaziwe ngumthetho, umqeshi unokuphela nje ngokuba ngumntu omhlophe. Iipasiphinde zibhalwe xa imvume iceliwe ukuba ibe kwindawo ethile kwaye ngenjongo yintoni, kwaye nokuba eso sicelo sichithwe okanye sinikeziwe. Ngaphantsi komthetho, nawuphi na umsebenzi karhulumente unokususa ezi zifakelo, ngokususa imvume yokuhlala kuloo ndawo. Ukuba incwadi yokupasa ayifumanekanga ukungena ngokusemthethweni, amagosa angabamba umnini wayo aze amfake entolongweni.
I-Colloquially, ukudlula kwaziwa ngokuba yi- dompas , oko kwakuthetha ngokuthe ngqo ukuba "idlulile." Ezi zidlulileyo zaba ziimpawu ezizithiywayo kunye ezidakisayo zobandlululo.
UkuLawula iMithetho yeMithetho
Abantu baseAfrika bavame ukuphula imithetho yokupasa ukuze bafumane umsebenzi kwaye baxhase iintsapho zabo kwaye bahlala phantsi kokusongelwa kweentlawulo, ukuxhatshazwa kunye nokubanjelwa. Ukukhuselana nemithetho yokuxhatshazwa kwabangela umzabalazo olwachasene nobandlululo-kuquka i-Campaign Defiance kwii-50s zakuqala kunye noqhankqalazo olukhulu lwabesetyhini ePitoli ngo-1956. Ngo-1960, abantu baseAfrika batshisa iipasela zamapolisa eSharpeville kunye nabangu-69 ababhikishi babulawa. Ngexesha lama-70s kunye nama-80, abaninzi abantu baseAfrika abaphula imithetho yokupasa balahlekelwa ngummi wabo kwaye baxoshwa kwiindawo zasemaphandleni ezihlwempuzekileyo. Ngelo xesha imithetho yokupasa yachithwa ngo-1986, abantu abayizigidi ezili-17 babanjwe.
U-N'ko uLwimi lweSouleymane Kante
Bangladesh | Iinkcukacha kunye neMbali
Kutheni uzikhathaze ngeBowulf?
UCarrie Chapman Catt
Iintetho zesiTaliyane zokuThengwa eItali
Uluphi Ulwimi Ulwimi?
I-Particle Movement (igrama)